🥇 ▷ Sharaxaad ka bixi patent Nintendo Switch alaabada wanaagsan ee Stylus iyo stra-Joy xargaha ✅
Sharaxaad ka bixi patent Nintendo Switch alaabada wanaagsan ee Stylus iyo stra-Joy xargaha
Nintendo wuxuu dalbaday rukhsad loogu talagay qalab cusub oo loogu talagay ‘Turnch Patent’ console gacanta lagu habeeyo ah oo dib loo soo diray Juun 4, 2019, waana la sii daayay wax yar ka badan. Tani waxay muujineysaa waxa loogu sharaxi karo qalin qalin loogu talagalay ‘Nintendo Switch’.
Ka baxsan qadka taabashada ee dusha sare, maqaarku wuxuu u egyahay isku mid inuu yahay isku dhejinta suunka dhexda ee Joy-Con. Waxay leedahay laba batoon oo isku dhinac ah si ay si fudud ugu galaan furayaasha caadiga ah ee SL iyo SR. Xitaa ku qalabeysan xarig isku mid ah.
Waxa intaa u dheer oo dhan, aaladaha lagu sharxay patent-ka ayaa ah kuwo ka fudud noocyada kuwa hadda jira. Markii lagu xidho Joy-Con, taabashada shay ciyaar oo leh maqaarka ayaa sababaya in Joy-Con ay noqoto mid xanta. Tani waxay u oggolaaneysaa faallooyinka inay galaan ciyaaraha Nintendo Switch ee adeegsada qalabkan aan suuragal ahayn oo leh qaab casri ah.
Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa badhamnada ‘Joy-Cons’ ee ku rakiban si aad u saameyn ugu yeelatid sida qalinku si dhakhso leh u shaqeeyo. Tusaale ahaan, ciyaar sawir, waxaad ku bedeli kartaa dhumucda qalinkaaga isla markiiba adoo riixaya batoonka.
Si aad u noqoto mid caddaalad ah, Nintendo horeyba waxay u leedahay cinwaan. Beddel. Laakiin leh rukhsadan cusub, shirkaddu waxay ku dari kartaa iyada oo lagu daro suunka Joy-Con. Kuwa adeegsanaya labadaba, waxay ugu yaraan heli karaan ikhtiyaar ay ku iibsanayaan hal qalab kaliya halkii ay ka isticmaali lahaayeen laba. Laakiin dhinaca kale, cayaaraha sida dhabta ah u adeegsada qalinka waa naadir. Tusaalaha kaliya ee maskaxda ku soo dhaca waa da’da maskaxda.
(Xigasho: USPTO iyada oo loo marayo Siliconera)